Waa kee laacibka ugu fiican kubbada cagta 20-kii sano ee ugu dambeysay?…(Cristiano Ronaldo ayaa kaaga jawaabaya) – Gool FM
Waa kee laacibka ugu fiican kubbada cagta 20-kii sano ee ugu dambeysay?…(Cristiano Ronaldo ayaa kaaga jawaabaya)
(Lisbon) 11 Juunyo 2016. Dooda ku aadan midkee fiican Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waa ma dhammaato oo labada laacib ayaa ku guuleysanayay abaal marinta Ballon d’Or sideedii sano ee la soo dhaafay.
Laakiin Ronaldo oo ay u sahlan tahay inuu nafsadiisa siduu doono u ammaano ayaa doodan ku soo afjaray afkiisa kaddib markii uu isku sheegay inuu yahay laacibka ugu fiican adduunka kubbada cagta 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Kabtanka xulka Portugal ayaa mar uu u waramayay jariiradda Undici ee ka soo baxda dalka Talyaaniga ayaa la waydiiyay su’aal ahayd intee nafsadaada ka galin lahayd ama isku qiimeyn lahayd xiddigaha ugu fiican labaatan kii sano ee la soo dhaafay kubbada cagta.
Wuxuu ku jawaabay: “Halkee nafsadeeda uga qiimeyn lahaa xiddigaha ugu fiican 20-kii sano ee la soo dhaafay? Dhanka wanaaga anigoo u fikiraya intaa kaddib waxaan aaminsanahay anigoo eegaya waxaan ku guulestay, anigaa ah kan ugu fiican.
31-jirkan ayaa iminka ku maqan waajibaadka xulkiisa Portugal ee qeyb ka ah tartanka Euro 2016 oo xalay ka furmay Faransiiska wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dadka dalkiisa u noqdo niyad galin.
“Waxaan dareemayaa inaan ahay sida muwaadin adduunka ah, laakiin waxaan kaloo ahay wiil reer Burtuqiis kaa oo jecel meesha uu ka yimid kuna faraxsan inaan ma talo dalkeyga heerarka sare, kaddib Euro 2014 waxaan dareemay inaan qeyb ka ahay jiilkan wayn, waxaan garanayaa gabdho badan iyo wiilal badan oo ii arka maanta sida niyad galiye.”.
"Waa halis haddii xulka ingiriisku uu ku tiirsanaado Vardy" - Harry Redknapp
EURO 2016: Switzerland oo gool madi ah ku maray xulka Albania…(Kulankii walaalaha wada dhashay ee labada calan kala matalayay)+SAWIRRO